YEYINTNGE(CANADA): Thursday, April 09
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/09/2009 1 အကြံပြုခြင်း
New from CSW -amoving and inspiring film! Join the CSW team as they travel across the Thai-Burma border to show solidarity with the people of Burma. Journey with us and find out how you can help ...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/09/20090အကြံပြုခြင်း
ဧပြီလအတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင် /နေပြည်တော်ကို မြို့နယ် ၈ ခုပါဝင်သော ခရိုင်မြို့တော် အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်/နာဂစ်ကြောင့် မြစ်အတွင်းနစ်မြုပ်နေသော ပစ္စည်းများဆယ်ယူသူများရှိနေ နစ်မြုပ်ပစ္စည်းဆယ်ရာတွင် ရေလမ်းကြောင်းအန္တရာယ်ဖြစ်ရန် ပိတ်ဆို့သည်အထိဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာကအရေးယူ /တောင်းရမ်းသူကလေးငယ်များ လုံးဝပပျောက်ရန်သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားလိုသူများရှိနေအကြောင်းကြားပါက တောင်းရမ်းသူကလေးများအား နိုင်ငံတော်ကစောင့်ရှောက်ပေးရမည်ဟု ကလေးသူငယ်ဥပဒေတွင်ပြဋ္ဌာန်းထား /မြစ်ကြီးနားထောင်ရောက် ဇာဂနာနှင့် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရပဲ ငွေလိမ်ခံရ/စစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူမယူ ကရင်နီတပ်ဖွဲ့ကို ထိုင်းစစ်တပ်မေးမြန်း/စ်အစိုးရ၏စွပ်စွဲချက် ရှေ့နောက်မညီကြောင်းဝေဖန်/
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၅ရက်နေ့က စစ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ ရေးသားတဲ့ တရုတ် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဖက် သတင်းဌာနတွေက မဟုတ်မမှန် သတင်းတွေ ဖြန့်တယ်ဆိုတဲ့ ရေးသားချက်ဟာ မှားယွင်းကြောင်း တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာ နေထိုင်သူတွေက RFAကို ပြောပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က တရုတ် အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တဦး မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာနေချိန်မှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း မရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ရာကျတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်များနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း ယူနန်ပြည်နယ် ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို RFAနဲ့ တကွ ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေက မတ်လ ၂၆ရက်နေ့တွေက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကို စစ်အစိုးရသတင်းစာက မဟုတ်မမှန် သတင်းတွေ ဖြန့်တယ်ဆိုပြီး ပြန်လည် ချေပထားတာပါ။
သတင်းစာမှာ ဒီသတင်းကို ယူနန်ပြည်နယ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ မဟုတ်ကြောင်း ဟောင်ကောင်မှာ ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က Phoenix TVက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်နေ့ ညက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီရေးသားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ ဦးအောင်ကျော်ဇောက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူနန်တီဗွီနဲ့ Phoenix TV နှစ်ခုစလုံးက လွှင့်ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဦးအောင်ကျော်ဇော။ ။ 'အဲဒီ ယူနန် တီဗီကနေ ဒီသတင်းကို စလွှင့်ပါတယ်လို့ ဒီအမျိုးသမီးက ပြောပြီးတော့ လွှင့်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ cable က ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောသလို Phoenix TVဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ယူနန်ပြည်နယ်မှာ စလောင်း အကြီးကြီးတွေ ချိတ်တဲ့လူတွေသာ ရနိုင်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဝေစင်းလိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးတယ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ သူတို့ အဲဒီ ပညာရှင်တယောက်နဲ့ ဒေါ်စုအကြောင်း ဆွေးနွေးတာတော့ ရှိတယ်။ ၁၅မိနစ်၊ မိနစ် ၂ဝလောက် ကြာတယ်။ အဲဒါလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ့လိုက်တယ်။ ဒါက သတင်းအနေနဲ့ တက်လာပြီး တီဗီကနေပြီးတော့ အဲဒီ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ တင်လို့ ဘလော့ဂ်ထဲမှာ တွေ့လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။'
တကယ်တော့ စစ်အစိုးရသတင်းစာမှာ ရေးသားချက်ကို ဖတ်ကြည့်ရင်တောင် ဒီသတင်းကို ထုတ်လွှင့်တယ် ဆိုတဲ့ ရက်စွဲများ ရှေ့နောက်မညီ ဖြစ်နေတာ တွေ့နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဦးအောင်ကျော်ဇော။ ။ 'တရုတ်တွေကို ကျွန်တော် သူတို့ သတင်းစာကို လိုက်ပြပြီးပြီ၊ အားလုံးက ဝိုင်းရယ်တယ်၊ တရုတ်တွေက ရယ်တယ်။ အဲဒီတော့ မရှက်မကြောက်ဗျာ၊ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီကိစ္စက ဘာမှ ထူးခြားတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဖူး။ တရုတ်ပြည်ကလည်း နိုင်ငံကြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သူက ကစားမှာပဲ။ ဗမာ စစ်ဗိုလ်တွေလည်း ကစားနေတာ။ အဲဒီတော့ ဒါကို ဆင်ကြီးက ပြန်ကစားတဲ့အခါ ဆိတ် ဟိုဒင်းက မခံနိုင်သလို ဖြစ်လို့ကို ပြန်ဖြစ်လာတာ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထူးခြားပြီး ဘာမှ မခံစားရပါဘူး။'
နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေက ဒီသတင်းကို မတ်လ ၂၆ရက်နေ့တွေက ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက် မူဆယ်မြို့ကို မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေးဌာန အကြီးအကဲတဦး ရောက်ရှိလာပြီး ယူနန်သတင်းဌာနက ထုတ်လွှင့်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမူရင်းကို ကူးယူနိုင်ဖို့ တရုတ်ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာတွေကို ထောက်လှမ်းရေးက လိုက်လံ မေးမြန်းတာတွေ ရှိတယ်လို့လည်း တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကုန်သည်တွေက RFAကို ပြောပြပါတယ်။
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ရှိ အမေရိကန် ထုတ်ဆေးဝါး အချို့မှာ စစ်မှန်မှု မရှ်ိဟုဆို
ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ်ဆေးဝါးအချို့မှာ စစ်မှန်သောဆေးဝါးများမ
ဟုတ်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၂နှစ်တာနေထိုင်ခဲ့သူ ဦးသန်းလွင်ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ(ငြိမ်း)ဗဟိုဘဏ်ကပြောသည်။အထက်
ပါပုဂ္ဂိုလ်က ၄င်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် ဆေး
ပစ္စည်းအချို့၏အမည်နှင့် အာနိသင်ကို အမေရိကန် ဆရာဝန်ကြီးများထံ မေးမြန်းခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ထိုသို့မေးမြန်းရာ
တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှ နှစ်စဉ်ပြုစုထုတ်ဝေသော ဆေးဝါးစာအုပ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ
ထုတ်နာမည်ကြီး ဆေးဝါးအချို့မှာ မရှိကြောင်း၊ ရှိနေသောဆေးဝါးများတွင်လည်း အတုများ ပါဝင်ကြောင်း ပြော
ကြားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ အဓိကအတုပြုလုပ်သော ဆေးဝါး အမျိုးအစားများမှာ အားဆေးများဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်
တွင်းဆေးဈေးကွက်အတွင်းရှိ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များသော ဈေးနှုန်းမြင့်ဆေးဝါးအချို့ကိုလည်းသေချာစစ်ဆေး
ဝယ်ယူမှသာ စိတ်ချရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “ဆရာဝန်ကြီးနာမည်တော့် အန်ကယ်မပြောတော့ဘူး။ ဟိုမှာ
ဆေးကုတယ်။ ဒီကိုပြန်ရောက်လာတော့သူတို့နိုင်ငံထုတ်အားဆေးတွေ သောက်ချင်လို့စုံစမ်းကြည့်တာတချို့ဆေး
တွေက သူတို့နိုင်ငံကထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာရှိတဲ့သူတို့ နိုင်ငံထုတ် ဆေးအချို့ကလည်း သေသေချာချာ
တိုက်ကြည့်ရင် Website အညွှန်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီလိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ မပါဘဲ ဆေးနာမည်၊ ဆေးအညွှန်းနဲ့
Made in USAဆိုတာပဲပါတယ်” ဟုပြောကြားကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာ
နေပြည်တော်ကို မြို့နယ် ၈ ခုပါဝင်သော ခရိုင်မြို့တော် အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရုံးများနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးရုံးများ အခြေစိုက်ရာနေပြည်တော်မြို့တော်ကိုမြို့နယ် ၈ ခု
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ခရိုင်မြို့တော်အဖြစ်နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ နေပြည်တော် ခရိုင်
မြို့တော်အတွင်း ယခင်ရှိပြီးသားဖြစ်သော နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် လယ်ဝေး မြို့နယ်နှင့်
သီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်နှင့် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်စုစုပေါင်း၈မြို့နယ်ဖြင့်
ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆
ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သောအမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါအမိန့်စာအရ နေပြည်တော်မြို့
နယ်ကို မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိသော မြို့နယ်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ထို့အတူပျဉ်းမနားခရိုင်ဟူ၍ခေါ်
ဝေါ်သုံးစွဲခြင်းကိုလည်း ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး၊ နေပြည်တော်ကိုခရိုင်မြို့တော်အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်
ကြောင်းနေပြည်တော်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အသစ်ဖော်ထုတ်သောမြို့နယ်များတွင်ရှိပြီးသား ကျေးရွာ အမည်များကို ရပ်ကွက် အမည်များ သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊
ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာရပ်ကွက်၊ အောင်ဇေယျရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်စသည်ဖြင့်အသစ်ဖော်
ထုတ်သော ရပ်ကွက်များလည်းရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ပြောကြားချက်အရသိရသည်။ အသစ်ဖော်ထုတ်သောမြို့
နယ်များတွင် ဥတ္တရသီရိနှင့် ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ်များမှာ ၂၀၀၇ခုနှစ်နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပြီး၊ ပုဗ္ဗာသီရိ၊ ဇမ္ဗူသီရိနှင့် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်များမှာ ယခုနှစ်တွင်းမှ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်လိုက်သည့် မြို့နယ်
များဖြစ်သည်။ နေပြည်တော်ခရိုင်တွင် မြို့နယ်၈ခုရှိလာသဖြင့် ယခင်မြို့နယ်ပေါင်း၃၂၆မြို့နယ်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံ
မှာ မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ပုဗ္ဗာသီရိ မြို့နယ်မှ မြေကွက်များအား နေပြည်တော်တွင် ၂ နှစ်နှင့် အ
ထက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို မြေကွက်များမဲနှိုက်၍ချထား ပေးလျက်ရှိကြောင်း အစိုးရ
၀န်ထမ်းများကပြောကြားကြောင်း၂၀၀၉ခုနှစ်ဧပြီလ ၉ရက်နေ့ထုတ်7 Day Newsဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Call for an investigation into Ivanhoe's jailed Bu...
ပြည်တွင်း ဈေးကွက်ရှိ အမေရိကန် ထုတ်ဆေးဝါး အချို့မှ...